के तपाईं पनि दैनिक रुपमा अण्डा खानु हुन्छ ? एकपटक यो अवश्य पढ्नुस ! – AB Sansar
October 28, 2020 adminLeaveaComment on के तपाईं पनि दैनिक रुपमा अण्डा खानु हुन्छ ? एकपटक यो अवश्य पढ्नुस !
अण्डालाई प्रोटिनको राम्रो स्रोत भनेर यसलाई दैनिक खान सुझाइन्छ । विशेषगरी, ब्रेकफास्ट (बिहानको खाना) मा । हिन्दीमा एउटा गीत नै छ ‘सन्डे हो या मन्डे, रोज खाओ अण्डे’ तर अण्डा खानु स्वास्थ्यका लागि ठिक छ कि बेठिक भनेर विज्ञहरुले वर्षौंदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । **** याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
एउटा मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनका अनुसार दिनमा दुईवटा मात्रै पनि अण्डा खाँदा यसले मुटुलाई हानी पुर्याउने र उमेर नपुग्दै मृ’त्यु हुने बताएको छ । अण्डाको पहेँलो भागमा धेरै मात्रामा कोलेस्ट्रोल हुने कारणले यस्तो ख’त’रा देखिएको हो ।
एउटा ठूलो अण्डामा करिब एक सय ८५ मिलिग्राम कोलेस्ट्रोल हुन्छ, जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दैनिक अधिकतम खान हुने भनेको ३०० मिलिग्रामको आधाभन्दा धेरै हो । उक्त अध्ययन १७ वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी सहभागीहरूमा गरिएको ६वटा परीक्षणहरूको तथ्याङ्कमा आधारित विश्लेषण हो ।**** याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
गायिका मेनुका पौडेलले खोलिन रमेश प्रसाइको बारेमा अहिले सम्म कसैलाई थाहा नभएको यस्तो राज ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
माछा खानु हुन्छ भने सावधानः माछामा ७ दिनसम्म बाँच्दो रहेछ कोरोना भाइरस
आफ्नी हजुरआमालाई बचा’उन यी नातिले जे गरे, सिंगो विश्वले गर्दैछ तारिफ [भिडियो सहित]
साबधान ! खल्तीमै ओप्पो मोबाइल प ड्कि एपछी … (भिडियो)
June 16, 2021 Ab-संसार
September 17, 2021 Ab-संसार